Kensington KeyCover™ Hard Case Keyboard for iPad Air | Buy online | SHOP.COM.MM
Kensington KeyCover™ Hard Case Keyboard for iPad Air
iPad snaps securely in place for 360° protection
QuickRelease™ rubber corners protect your iPad and make access easy
သာမာန် Ipad Case များနှင့်မတူသော Keycover ဖြစ်ပါသည်။ Ipad နှင့် အံဝင်ခွင်ကျဖြစ်အောင် ဖန်တီးထားသောဒီဇိုင်းနှင့် အကြမ်းခံခြင်းကြောင့် မည်သည့်ထိခိုက်မှုမှမဖြစ်အောင် အာမခံပေးနိုင်ပါသည်။ အသုံးပြုရလွယ်ကူစေရန် Case ၏ ထောင့်စွန်းများကို ရာဘာများနှင့် ပြုလုပ်ထားပါသည်။ ထို့အပြင် Bluetooth ဖြင့်ချိတ်ဆက်၍ Wireless Keyboard အားအချိန်မရွေး၊ နေရာမရွေး အသုံးပြုနိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။
Snap your iPad into the Kensington KeyCover and you’ll be addingaprotective, stylish case plus the productivity ofawireless Bluetooth keyboard. The Kensington KeyCover beautifully complements the aluminum back of your iPad for the perfect combination of aesthetics and 360° hard-case protection. And the KeyCover automatically wakes your iPad when you open it and puts it to sleep when you close the cover.
Automatic wake and sleep modes when KeyCover is opened or closed
Specifications of KeyCover™ Hard Case Keyboard for iPad Air